News 18 Nepal || टिप्स
काठमाडौं । ज्योतिषशास्त्रमा हत्केलाका रेखा र चिन्ह अनुसार मानिसको भविष्य र स्वभाव बारे जानकारी दिइन्छ । त्यसैगरी हस्तरेखा विज्ञानमा बुढी औलाको बनावट अनुसार समेत यसबारे जानकारी दिन सकिन्छ । आज हस्तरेखा ज्योतिषशास्त्र अनुसार हातको बुढी औला कस्तो हुदाँ मानिसको स्वभाव र भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौ । समुद्रशास्त्र अनुसार जुन मानिसको हातको बुढि ओला लचिलो हुन्छ र सहजै पछाडी जान सक्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिमा जिद्धीपना कम हुने मान्यता...
काठमाडौं । सामुद्रीक शास्त्र अनुसार शरीरको अंग फर्फराउँदा यसलाई भविष्यका सम्भावित घटनाको मान्ने गरीन्छ । यस्ता संकेत कुनै राम्रा र कुनै नराम्रा पनि हुने गर्दछन् । आज हामी शुभ संकेत गर्ने शरीरका अगंका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ; १. यदी तपाईको टाउकोको भाग फर्फराएको छ भने समुन्द्र शास्त्र अनुसार यसले घरजग्गा लाभ प्राप्त गर्ने संकेत गर्दछ । साथै सफल हुने सम्भावना मानिन्छ । २. यदी तपाईको हात फर्फराएको छ भने खुसी हुनुहोस्, तपाईले...
एजेन्सी । उपहारको लेनदेन हाम्रो जीवनको एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो । उपहार पाउने ब्यक्ति हरेक व्यक्ति खुशी हुने गर्दछन् । यो स्वाभाविक पनि हो, कसैले दिने उपहारले उसको नियतबारे स्पष्ट पार्दछ । तर, कतिपय अवस्थामा केही यस्ता चिजबिज हुन्छन् जसलाई भूलेर लिनु हुन्न । धार्मिक मान्यता अनुसार यस्ता वस्तु उपहार लिएमा घर र उपहार पाउने ब्यक्तिको जीवनमा नकारात्मक असर पर्दछ । तसर्थ जानाजान यस्ता वस्तु उपहार दिने ब्यक्तिले समेत तपाईंको...
काठमाडौं । हामीले देख्ने सपनाहरुका शुभ र अशुभ फलहरु प्राप्त हुने गरेका छन् । कतिपय यस्ता सपना हुन्छन् जस्ले हाम्रो जीवनको सफलता र सुख प्राप्त तर्फ अग्रसर गराउंदछ । त्यही यत्स सपना हुन्छन् जसले जीवनमा ठूलो संकट नै निम्त्याउंन सक्दछ । आखिर कस्ता सपनाले कस्ता फल प्राप्त हुन्छन त ? हामी यहाँ कस्ता युवतीहरु सपनामा देख्दा कस्तो फल प्राप्ती हुन्छ त्यही बिषयमा कुरा गरी रहेका छौं । यदि सपनामा गोरी...
एजेन्सी । वास्तुशास्त्र अनुसार विभिन्न दिशाहरुको विभिन्न स्वभावहरु हुन्छन् । दिशाहरुको स्वभाव अनुसारका संरचनाहरु त्यस दिशामा बनाउनु बनाउँदा शुभ मानिन्छ । पूर्व दिशाबाट सूर्योदय हुने भएकाले यस दिशाबाट निकै राम्रो उर्जाहरु आउने मान्यता रहेको छ । त्यसकारण पूर्व दिशालाई अन्य दिशाहरु भन्दा निकै महत्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ । पूर्व दिशाको मालिक देवताहरुका राजा इन्द्रलाई मानिन्छ । साथै नवग्रहमध्ये सूर्यले पनि यस दिशाको नै प्रतिनिधित्व गर्दछ । वास्तुशास्त्र अनुसार यस दिशामा वास्तुपुरुषको...